Maalinta: Diseembar 18, 2016
Badhanka argagaxa wuxuu ku qasban yahay tagaasida: Kocaeli Xarunta Iskuxirka Gaadiidka Magaalo Weynta Magaalada (UKOME) waxay qaadeysaa tilaabooyin looga hortagayo shilalka xun ee gawaarida adeega iyo tagaasida. Marka loo eego go'aanada UKOME, xoogaa adeeg ah [More ...]
2020 milyan oo deeqo ah oo laga helo EU oo ay siiso Izmir iyada oo ku dhex jirta baaxadda HORIZON 2.5: AMA HORIZON 2020 olan, barnaamijka ugu sareeya ee miisaaniyadda ee Midowga Yurub, ayaa laga fulin doonaa Izmir. Baaxadda barnaamijka halkaasoo İzmir ugu horreeyo magaalada 39, [More ...]
Maanta taariikhda: 18 December 1923 Madaxtooyada Nafia, Chester Taariikhda
Maanta Taariikhda 18 Diseembar 1923 Wasaaradda Naafada waxay ku shaacisay nootaayo dadweyne in mudnaanta Chester la kansalay. 18 Diseembar 1926 Dhismaha qaybta Turhal-Sivas ee qadka Samsun-Sivas waxaa la siiyey shirkadda Biljamka Societe Industtrielle desTrava-ux. Sida ku xusan heshiiska [More ...]